Miaraka amin'i Jesosy amin'ny fifaliana sy alahelo - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-03 mpandimby ny Magazine > Miaraka amin'i Jesosy amim-pifaliana sy alahelo
Manaiky ve ianao fa niharan'ny fahatezerana vaovao ny media? Seho amin'ny fahitalavitra tena izy, andian-tantara, fandaharana vaovao (amin'ny Internet, fahitalavitra sy radio), media sosialy, ary adihevitra politika - toa miha mahasosotra avokoa izy rehetra. Ary eo koa ireo mpitory tsy mitandrina izay mitory ny filazantsara fanambinana miaraka amin'ny fampanantenany diso momba ny fahasalamana sy ny harena. Rehefa nanontany ny iray tamin'ireo mpanohana an'ity hafatra diso ity aho tamin'ny resaka iray naninona ny vavaka "tenenina dia ho azonao" ny fivavahan'ity hetsika ity dia tsy nifarana ireo krizy maro eto amin'ity izao tontolo izao ity (IS, Ebola, krizy ara-toekarena, sns.) I ny valiny ihany no azoko fa nanelingelina azy tamin'ity fanontaniana ity aho. Marina fa mety ho somary mahasosotra aho indraindray, saingy ny fanontaniana no tena dikan-teny matotra.
Ny vaovao tsara dia i Jesosy, fa tsy harena
Indray mandeha mahasosotra ahy dia rehefa marary aho (farafaharatsiny izany no lazain'ny vadiko, Tammy). Soa ihany (ho antsika roa tonta) Tsy marary matetika aho. Tsy misy isalasalana, antony iray mahatonga an'io i Tammy mivavaka ho an'ny fahasalamako. Misy vokany tsara ny vavaka, fa ny Evanjelin'ny fanambinana kosa dia mampanantena amin'ny tsy marina fa raha matanjaka ny finoana dia tsy harary mihitsy. Milaza ihany koa izy fa raha marary ny olona (na manana zavatra) dia satria tsy ampy ny inoan'ny olona iray. Ny fisaintsainana sy fampianarana toa izany dia fanodikodinana ny finoana sy ny tena filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nisy namako nilaza tamiko ny amin'ny zava-doza nitranga fony izy mbola kely. Namoy ny rahavaviny roa tamin'ny lozam-piarakodia. Alao an-tsaina fotsiny ny zavatra mety ho tsapan'ny rainy rehefa nilaza taminy ny mpanohana an'io fotopampianarana sandoka io fa maty ny zanany roa vavy satria tsy dia nino izy! Ny eritreritra ratsy sy ratsy toa izany dia tsy miraharaha ny zava-misy an'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany. Jesosy no filazantsara - izy no fahamarinana manafaka antsika. Mifanohitra amin'izany kosa, ny Prosperity Gospel dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra sy milaza fa misy fiantraikany amin'ny fitahian'Andriamanitra antsika ny fitondrantenantsika. Mampiroborobo koa ny lainga fa ny tanjon'ny fiainana ety an-tany dia ny hisorohana ny fijaliana ary ny tanjon'Andriamanitra dia ny hampitombo ny fahafinaretantsika.
Niaraka tamin'i Jesosy tao anaty fijaliana
Nandritra ny Testamenta Vaovao, niantso ny olony Andriamanitra hizara fifaliana sy fijaliana amin'i Jesosy. Ny mijaly izay resahantsika eto dia tsy ny fijaliana vokatry ny hadisoana diso na fanapahan-kevitra tsy mety, na noho isika niharan'ny toe-javatra na tsy ampy finoana. Ny fahoriana izay nisedra an'i Jesosy ary tokony hiaritra eto amin'ity tontolo lavo ity dia ny ao am-po no resahana. Eny, nijaly ara-batana i Jesosy araka ny fijoroan'ny Filazantsara fa ny fijaliana izay niaretany an-tsitrapo dia vokatry ny fitiavany feno fangorahana ny olona. Ny Baiboly dia manamarina izany amin'ny toerana maro:
“Fa nony nahita ny vahoaka Izy, dia nangoraka ny fony, satria efa reraka sy reraka toy ny ondry tsy misy mpiandry ireo”. (Matio 9,36 ELB)
“Ry Jerosalema, ry Jerosalema ô, ianao mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahina ho aminao! Impiry Aho no naniry hanangona ny zanakao tahaka ny fanangon'ny reniakoho ny zanany ao ambanin'ny elany; ary tsy tianao izany!" (Matio 23,37)
« Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay mavesatra entana sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ka mianara amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa malefaka ny ziogako ary maivana ny entako. (Matio 11,28-30)
« Ary nony mby akaiky izy, dia nahita ny tanàna ka nitomany azy ka nanao hoe: Na dia fantatrareo tamin’izany andro izany aza izay momba ny fiadanana! Fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. (Lioka 19,41-42)
"Ary nihiratra ny mason'i Jesosy." (Johanes 11,35)
Ny fizarana io fitiavana feno fangorahan’i Jesosy io ho an’ny olona matetika dia mitarika fanaintainana sy fijaliana, ary mety ho lalina tokoa ny fijaliana indraindray. Ny fialana amin’ny fijaliana toy izany dia ny fialana amin’ny fitiavana ny hafa amin’ny fitiavan’i Kristy. Ny tanjona toy izany dia hahatonga antsika ho mpikatsaka fahafinaretana tsy mifantoka amin'ny tena ary izany indrindra no tohanan'ny fiaraha-monina laika: Ampaherezo ny tenanao - mendrika izany ianao! Ny Filazantsaran'ny Fanambinana dia manampy an'io hevitra ratsy io, ilay antsoina hoe finoana diso, izay natao hitaona an'Andriamanitra hanome ny faniriantsika hedonisma. Ity fampianarana diso sy mampalahelo ity izay azontsika ialana amin’ny fijaliana amin’ny fanitsiana mafy izany amin’ny anaran’i Jesosy dia mifanohitra amin’izay nosoratan’ny mpanoratra ny Hebreo momba ireo mahery fo amin’ny finoana (Hebreo). 11,37-38): Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia “ notoraham-bato, notapahana, novonoina tamin’ny sabatra; nirenireny nitafy hoditr’ondry sy hoditr’osy; niaritra ny fahantrana sy ny fahoriana ary ny fampijaliana izy ireo. Tsy voasoratra ao amin’ny Hebreo hoe tsy ampy finoana izy ireo, fa olona nanam-pinoana lalina — olona tsy mendrika izao tontolo izao. Na dia nijaly mafy aza izy ireo, dia nijanona ho vavolombelon’Andriamanitra nahatoky sy ny fahatokiany tamin’ny teny sy ny asany.
Araho ny dian'i Jesosy
Jesosy, ny alina talohan’ny nijaliany lehibe indrindra (naharitra noho ny fampijaliana sy ny nanomboana azy tamin’ny hazo fijaliana) dia nilaza tamin’ny mpianany hoe: “Fianarana no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo” (Jaona 1.3,15). Rehefa nandray ny teniny i Petera, iray tamin’ireo mpianany, dia nanoratra toy izao tatỳ aoriana: “Fa izao no niantsoana anareo, fa Kristy nijaly ho anareo ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany.” (1. Petrus 2,21). Inona no dikan’ny hoe manaraka ny dian’i Jesosy? Mila mitandrina isika eto, satria amin’ny lafiny iray ny fananaran’i Petera dia matetika tery loatra ary matetika manilika ny fanarahana an’i Jesosy amin’ny fijaliany (izay lazain’i Petera mazava tsara kosa). Etsy andaniny, midadasika loatra ny fananarana. Tsy voantso hanahaka ny lafiny rehetra amin’ny fiainan’i Jesosy isika. Koa satria tsy Jiosy Palestiniana tamin’ny taonjato voalohany isika (tahaka an’i Jesosy), dia tsy mila manao kapa, akanjo lava, ary filatera isika mba hanarahana an’i Jesosy. Takatsika ihany koa (araka ny soso-kevitry ny teny manodidina ny fananaran’i Petera) fa i Jesoa, amin’ny maha-Zanak’Andriamanitra azy, dia tsy manam-paharoa ary mitoetra ho tsy manam-paharoa. Nanaraka ny teniny ny rivotra, ny onja, ny demonia, ny aretina, ny mofo ary ny hazandrano, rehefa nanao fahagagana mahagaga izy, izay nanamafy ny maha-izy azy ho ilay Mesia nampanantenaina. Na dia mpanara-dia azy aza isika dia tsy tonga dia manana ireo fahaiza-manao ireo.Eny, miantso antsika rehetra hanaraka an’i Jesosy ao anatin’ny fijaliana koa i Petera. In 1. Petrus2,18-25 Nohazavainy tamin’ny antokon’ny Kristianina andevo ny fomba tokony hataon’izy ireo, amin’ny maha-mpanara-dia an’i Jesosy, manoloana ny fitondrana tsy ara-drariny azony. Nanonona andinin-teny avy ao amin’ny Isaia 53 izy (jereo koa 1. Petrus 2,2224; 25). Ny hoe nirahina ho amin’ny fanavotana an’izao tontolo izao i Jesosy tamin’ny alalan’ny fitiavan’Andriamanitra dia midika fa nijaly tsy ara-drariny i Jesosy. Tsy nanan-tsiny izy ary nijanona ho toy izany ho setrin'ny fitsaboana tsy ara-drariny. Tsy nitifitra tamin’ny fandrahonana na herisetra izy. Hoy i Isaia: “Tsy nisy fitaka teo am-bavany”.
Mijaly satria tianao ny hafa
Nijaly mafy i Jesosy, nefa tsy nijaly noho ny tsy fahalalana na ny diso. Mifanohitra amin'izany: tonga tamin'ny tany noho ny fitiavana izy - tonga ny olombelona ny Zanak'Andriamanitra. Nino an'Andriamanitra sy tia an'ireo izay tonga teto an-tany izy, dia niaritra ny tsy rariny tsy ara-drariny ary tsy nanaiky hampijaly na dia ireo izay nanararaotra azy aza - tonga lafatra ny fitiavany sy ny finoany. Raha manaraka an'i Jesoa mijaly isika satria tiantsika ny olon-kafa, dia afaka mahazo fampiononana isika fa ity dia ampahany amin'ny manaraka antsika. Jereo ireto andininy roa ireto:
"Akaiky an'izay torotoro fo ny Tompo, ary manampy izay torotoro fo." ( Salamo 34,19)
"Ary izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'i Kristy Jesosy dia tsy maintsy henjehina." (2. Timoty 3,12) Rehefa mahita ny hafa mijaly mafy isika, dia feno fiantrana ho azy ireo.
Rehefa lavina ny fitiavanay sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia malahelo isika. Na dia sarobidy aza ny fitiavana toy izany satria manaitra ny fahoriantsika, tsy mandositra azy io isika ary tsy mijanona ho tia ny hafa tahaka ny itiavan’Andriamanitra azy ireo. Ny hijaly amin'ny fitiavana dia ny ho vavolombelon'i Kristy mahatoky. Manaraka ny ohatra nomeny isika ary manaraka ny diany.
Miaraka amin'i Jesosy amin'ny fifaliana
Raha miara-mandeha amin'i Jesôsy isika, dia hihaona amin'ny olona rehetra am-pitiavana, izany hoe hizara ny fijaliany. Etsy ankilany - ary io no mifanandrify amin'izany - matetika no mizara ny hafaliany - ny fifaliany fa voavonjy ao aminy ny olombelona rehetra, fa voavela heloka izy ary nanaiky azy tamin'ny fitiavana sy ny fiovany miova. , Izany dia midika fa raha manaraka azy mazoto isika, mizara fifaliana sy fijaliana miaraka aminy koa. Izay no fototry ny fanahy sy ny fiainana tarihin'ny Baiboly. Tsy tokony ho latsaka ao amin'ny filazantsara diso isika izay mampanantena fifaliana ary tsy misy fijaliana. Ny fananana anjara amin'izy roa dia ampahany amin'ny iraka ataontsika ary tena ilaina amin'ny fiarahantsika akaiky amin'ny Tompo sy Mpamonjy antsika be fitiavana.